२०७८ आषाढ ३, शुक्रवार
ने.क.पा. (मसाल)का महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहका फोटाहरु पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भएका विषयमा उठेका प्रश्नहरु र भ्रमबारे प्रकाश हाल्न यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
हाम्रो पार्टीको पी.वी.को २०६८�५�२७ मा बसेको बैठकमा का. मोहनविक्रम सिंहका फोटाहरु बारे केही समझदारी बनेको थियो । त्यो बेलासम्म उहाँका फोटाहरु खिच्न दिने निर्णय थिएन । तैपनि उहाँको जानकारी बिना उहाँका फोटाहरु खिच्ने र प्रकाशित हुने काम भइरहन्थ्यो । त्यो बैठकमा यो महशूस गरिएको थियो कि अहिलेको इलेक्ट्रिक साधनहरुको अत्यधिक विकास भएको अवस्थामा फोटाहरु खिच्न रोख्नु सम्भव छैन । हामीले फोटाहरु खिच्न नदिने निर्णय गरे पनि विभिन्न तरिकाले थाहै नदिइकन फोटाहरु खिचिने गर्दछन् र तिनीहरुलाई प्रकाशित पनि गर्ने गरिएको छ । कतिपय भेटघाट कार्यक्रमहरुमा जाँदा पनि क्यामरा वा मोवाइलहरुद्वारा फोटाहरु खिच्ने गरिन्छ र तिनीहरुलाई रोख्नु सम्भव हुँदैन ।
ती व्यवहारिक र प्राविधिक वाध्यताहरु माथि विचार गर्दै हाम्रँे पी.वी.को बैठकमा उहाँ कतै गएको बेलामा कसैले फोटाहरु खिच्न खोज्दा आपत्ति नगर्ने भन्ने समझदारी भएको छ । त्यसरी खिचिएका फोटाहरु पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भए पनि हामीले विरोध गर्ने वा रोक्न सक्ने कुरा भएन । त्यसका साथै त्यसको अर्थ टी.भी.मा खुला रुपले देखापर्ने, अन्तरवार्ता, पत्रकारहरुसितको भेटघाट वा आफ्ना पुस्तक पत्रपत्रिकाहरुमा फोटाहरुको प्रचार गर्ने भन्ने पनि होइन । त्यसका साथै पी.वी.ले उहाँ खुला हुने निर्णय गरेको भन्ने पनि होइन ।
पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम थिएन । त्यो पार्टीका पुराना र नयाँ नेताहरुको भेटघाटको सिमित कार्यक्रम थियो । पी.वी.को उपरोक्त प्रकारको निर्णयका कारणले त्यहाँ फोटाहरु खिच्दा आपत्ति प्रकट गरिएको थिएन । अन्तमा हामीले पुनः के स्पष्ट गर्न चाहन्छौं भने का. मोहनविक्रम सिंहका फोटाहरु पत्रिपत्रिकाहरुमा प्रकाशित हुनुको अर्थ उहाँ सार्वजनिक भएको होइन र पी.वी.ले त्यस प्रकारको कुनै निर्णय गरेको छैन ।
मिति ः २०६८ कार्तिक १४